Accueil > Gazetin'ny nosy > Kolikoly avo lenta: Tsy maty manota i Daya Raoussanaly Moïse ?
Kolikoly avo lenta: Tsy maty manota i Daya Raoussanaly Moïse ?
Trangan-javatra iray ahitana taratra ny kolikoly anafenan-keloka ity miseho any Toamasina ity.
Tany misy fotodrafitrasa maro any Betainomby Toamasina izay manan-tompo no tetehin’i Daya Raoussanaly Moïse hahodina ho fananany. Ny tetika voalohany nataony ka nampiasany kolikoly dia ny fananganany ady tamin’ny tompon’ity tany ao Betainomby Toamasina ity. Io fananganana ady io dia niteraka fifampikasihan-tanana ka nitoriany ny tompon’ilay tany, ary nanagadran’ny fitsarana tao Toamasina an’ilay tompon-tany hifonja herin-taona.
Tao anelanelan’izany no nanararaotan’i Daya Raoussanaly nikarakarana ny antontan-taratasy isan-karazany hanodinana ny fananan’ilay nigadra.
Sady ananan’ilay tompony taratasy ara-panjakana (titra) no vita baorina io toerana efa misyh fotodrafitrasa miorina ao Betainomby io.
Tamin’ny taona 2010 aloha dia nanao fifanaraham-panofana (contrat de bail) tamin’ny tompon’ny toerana ny vondrom-barotra « Société Imco ». An’i Daya Raoussanaly io vondrom-barotra io. Avy eo dia nampanofainy tamin’ny orin’asa « Ex-Zeren » indray ilay toerana efa nifanarahany tamin’ny tena tompony tamin’ny anaran’ny « Société Imco ». Taty aoriana dia fantatra fa na ny « Société Imco » na ny « Société Ex-Zeren » dia samy an’i Mois Daya Raoussanaly avokoa.
Taty amin’ny faha-27 jolay 2012 dia nisy didim-pitondrana mitondra ny laharana 20.567/ 2012 noraisin’ny lefitry ny primatiora misahana ny toekarena sy ny indostria, Botozaza Pierrot, izay nanafoana ny fifanaraham-panofana (résiliation de contrat de bail) tamin’ny faha-22 jona 2010 izay nifanaovan’ny « Société ex-Zeren » tamin’ny « Société Imco ».. voalaza ao anatin’io didim-pitondrana io avokoa moa ny antony nahatonga izay fanafoanana izay.
Hatramin’izao anefa dia miseho ho manana mpiaro any ambonimbony any ary toa malaza ho « lava tanan’akanjo » hatrany amin’ny Fitsarana any i Daya Raoussanaly Moise, ka manao ny fomba rehetra hangoronana ho azy ny fananan’olona.
Eo izany no mahatonga ny any Toamasina any, indrindra fa ireo mahafantatra ity raharaha ity sy ny tsy rariny ary ny tsy ara-dalàna ataon’i Daya Raoussanaly Moise, hiantso ny Bianco mba hampanao fanadihadiana an’itony raharaha itony fa mijaly ny madinika tsy mba manana vola lalaovina amin’ny resaka kolikloly avo lenta.
Manara-maso ny tohiny sy izay mety ho fivoaran’izao raharaha izao ny maro.